कति जीबी र्‍याम भएको स्मार्टफोन रोज्ने ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
काठमाडौं । तपाईं नयाँ स्मार्टफोन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने कति जीबी वाला र्‍याम भएको फोन खरिद गर्ने भन्ने बारेमा पक्कै सोच्नुहुन्छ । २ जीबी, ३ जीबी, ४ जीबी, ६ कति जीबी, ८ जीबी वा १२ जीबी र्‍याम भएको स्मार्टफोनमध्षे कुन रोज्ने ?
बजारमा १६ जीबी र १८ जीबी र्‍याम भएका स्मार्टफोनसमेत सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यतिमात्रै होइन पछिल्लो स्मार्टफोनमा त भर्चुअल माध्यमबाट र्‍याम थप्न मिल्ने सुविधा समेत आएको छ ।
यदि तपाईंले स्मार्टफोनको इतिहास केलाउनुभयो भने १२८ एमबी, ५१२ एमबी, १ जीबी र २ जीबीको र्‍याम हुने गर्दथ्यो । यदि तपाईंले ती दिन सम्झिनु भएको छ भने त्यतिखेर आउने एप्लिकेसनहरु पनि निकै हलुका आकारका हुने गर्दथे ।
तपाईंले ख्याल गर्नुभयो भने आजकलका एपहरु ५० एमबी, सय एमबी, ५०० एमबीका हुने गर्दछन् । अझ गेमहरु हेर्नुभयो भने त झन् एक जीबी, १.५ जीबी र २ जीबी आकारका हुने गर्दछन् ।
त्यसैले अहिलेको समयमा तपाईंले स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने कमसेकम ४ जीबी र्‍याम त हुन जरुरी छ । स्मार्टफोन उद्योगमा ४ जीबी र्‍याम एउटा स्ट्याण्डर्डको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।
त्यसैले स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीहरु पनि कम्तिमा ४ जीबी र्‍याम भएका स्मार्टफोनहरु ल्याउनेतर्फ जोड दिइरहेका छन् । ता कि एपहरु सहजै ओपन गर्न सकियोस् ।
यदि तपाईंले इन्ट्री लेभलका वा भनौं दश हजार आसपासका मोबाइलहरु हेर्नु भयो भने त्यस्ता फोनहरुमा २ जीबी वा ३ जीबी र्‍याम रहेको हुन्छ । र्‍यामको यो आकार त्यस्ता प्रयोगकर्ताका लागि उपयुक्त मानिन्छ, जो फिचर वा बारफोनबाट स्मार्टफोनमा शिफ्ट भइरहेका हुन्छन् ।
यी फोनहरु सामाजिक सञ्जाल, ह्वाट्सएप, युट्युव आदिका लागि पर्याप्त हुन्छन् । तर यहाँनिर हामी तपाईंलाई २ जीबी र्‍यामयुक्त स्मार्टफोन सकेसम्म प्रयोग नगर्न सुझाव दिन्छौं ।
किनभने यस्ता फोनहरुले ह्याङ भएर तपाईंलाई दिक्क पार्न सक्छन् । इन्ट्री लेभलकै स्मार्टफोन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने कम्तिमा ३ जीबी र्‍याम भएको स्मार्टफोन खरिद गर्नुहोस् ।
२ जीबी र्‍यामलाई बिर्सिदिनुहोस् । यदि तपाईं स्मार्टफोनमा फेसबुक, युट्युव, ट्वीटर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम जस्ता एप्लिकेसनका साथै सामान्य किसिमका गेमिङ एप प्रयोग गर्न चाहुनुहुन्छ भने आजको समयमा कम्तिमा ४ जीबी र्‍याम भएको स्मार्टफोन खरिद गर्नुहोस् ।
यदि तपाईं त्यसभन्दा पनि झन् हार्डकोर गेमिङमा रुची राख्नुहुन्छ भने तपाईंको रोजाई गेमिङ स्मार्टफोन नै हो । त्यस्तो अवस्थामा ८ जीबी र्‍याम भएको स्मार्टफोन खरिद गर्ने कोसिस गर्नुहोस् ।
उदाहरणको रुपमा यहाँनिर आईफोनलाई नै हेरौं । आईफोनमा ३ वा ४ जीबी र्‍यामको प्रयोग गरिएको हुन्छ । तर यस्ता आईफोनले पर्फर्मेन्सको मामिलामा १० वा १२ जीबी र्‍याम भएका एन्ड्रोइड फोनलाई टक्कर दिने क्षमता राख्दछन् ।